बालबालिका, COVID र जाडो: आफ्ना नानीबाबुलाई जाडो र COVID को सामना गर्न तयार गरौँ। – Karkhana
अब पौष महिना लागे संगसंगै, दिनहरू अझै छोटा र छोटा हुँदैछन्। मौसममा परिवर्तनले बालबालिकाहरुको लागि धेरै परिवर्तनहरूको संकेत दिन्छ, घाम प्यारो र शितल हावा अब चिसो हुँदै जान्छ, यससँगै रमाइलो हुने – कम जोखिमको बाहिरी क्रियाकलापहरु, खेलकुदहरु पनि काम हुँदै जान्छ। महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिने क्रममा, नानीबाबुहरु दुबै भाइरस र सामाजिक, भावनात्मक र अन्य प्रभावबाट त गुज्री रहेका छन्। अब त झन् जाडो महिना पनि थपिदई छ, यस्तो अवस्थामा आफ्ना नानीबाबुलाई जाडो र कोविद को सामना गर्न कसरी तयार गर्ने होला त ?
नानीबाबुहरुसंग मजाले कुरा गरी परिवर्तनको लागि तयारी गर्नुहोस्
मौसमको परिवर्तनले तपाईंको परिवारको लागि कस्तो अर्थ राख्छ भनेर कुरा गर्नुहोस्। आफ्ना साना देखि ठूला नानीबाबुहरुसंग कोविद र जाडो महिनाको बेला हुने समस्या र परिस्थितिको बारेमा खुलेर कुरा गर्दा सजिलो होला। मौसमको परिवर्तनले तपाईंको बाबुनानीहरुको दैनिक तालिका, बानी र गतिविधिहरूमा परिवर्तन आउन सक्छ।
जाडो महिना भएपनि, बाहिर निस्किनुहोस्
जाडो महिना भएपनि, बाहिर निस्किन अल्छि नगर्नु होला। शारीरिक रा मानसिक स्वास्थ्य कायम गर्न अहिले एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले अफ्न्ना नानीबाबुहरुको लागि उदाहरण सेट गर्नुहोस् ।
स्क्रीन टाईम को बारेमा धेरै चिन्ता नगर्नुहोला
फ्लू खोपले (Flu Vaccination) धेरै सजिलो बनाऊन सक्छ
फ्लू खोपले धेरै सजिलो बनाऊन सक्छ। रोग नियन्त्रण र रोकथाम दिशानिर्देश केन्द्रहरूले सुझाव दिन्छ कि ६ महिना र माथिका बालबालिका हरूलाई प्रत्येक सीजन दुर्लभ अपवादहरूको साथ फ्लू खोप लिनु पर्छ। यो बेला भएकाले यो खोप लगाउनु लागि पहिले भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। हाम्रा ओरिपरि पनि , विभिन्न क्लिनिक र अस्पतालहरुमा फ्लू खोपको जानकारी र प्रक्रिया बुज्न सक्नु हुनेछ।
पोसिलो र ताजा खाना खानुहोस्।
बालबालिका र मानसिक समस्या: डा. कार्कीको राय